समानान्तर Samanantar: April 2011
बिहान रानीबारीमा शिवलिंगकै छेउमा कुकुर बाँधेको देखेर चित्त दुख्यो । कस्ले बाँधेको होला? कस्तो कुकुरजस्तो ! भन्ने मुखबाट निस्क्यो । केहीबेर घुमेर फर्कने बेलासम्म पनि त्यो कुकुर त्यहीँ बाँधिएको रहेछ । नजिकैक एक जनालाई सोधेँ । कुकुर उनैको रहेछ । यसरी पूजा गर्ने ठाउँमा कुकुर नबाँध्नुपर्ने भने । उनले त झोंक देखाउन थाले । मान्छे निकै खाइलाग्दा थिए । जीउडाल हेर्दैमा डराउनुपर्ने । उनलाई मेरो गाला फोर्न मन लागेको थियो रे । उनको कुकुर चानेचुने हैन रे । कसैलाई टोकेको छैन रे । उनलाई बिहान मैले कुकुर भने रेँ । मुखमुखै लाग्ने आँट भएन। डरलाग्यो । साँच्चै झ्याम्म हान्यो भने भनेर । यो तन्देरी छँदा शिक्षण र राजनीति अनि बुढेसकालमा पत्रकारिता र अधिकारकर्मी भएकाले चित्त नबुझे बोलिहाल्ने र अन्याय सहन नसक्ने बानी लाग्यो । अब डर हुन थाल्यो । थुतुनोले ज्यानै जोखिममा पार्ने भयो ? के गर्ने होला ? ती कुकुरवालालाई शिवजीले सत्बुद्धि दिएकाले आज ज्यान जोगियो । जय शम्भो !
Posted by Govinda at 4/22/2011 08:31:00 AM No comments:
Labels: रानीबारीमा शिवलिंगमा कुकुर
Posted by Govinda at 4/07/2011 08:23:00 AM No comments: